China diki inotakurika kamuri evaporative mweya inotonhorera nechando Pack XK-05SY fekitori uye vanotengesa | XIKOO
XK-05SY diki Inotakurika kamuri evaporative mweya inotonhorera nechando Pack
XIKOO XK-05SY diki Inotakurika kamuri evaporative mweya inotonhorera inozivikanwa kwazvo, inoderedza tembiricha kuburikidza nemvura evaporative. uye idiki uye yakanaka, pane maficha sezasi pazasi:
Mutsva ABS Chinyorwa chepurasitiki chemuviri, Anti-UV, Anti-kuchembera, hupenyu hwakareba nguva. chena + bhuruu / grey ruvara, kuunza yakachena uye nyowani kunzwa. Chitarisiko chakagadzirwa nerupo, chakapfava uye chakanaka.
Super yakaderera simba rekushandisa 0.15kW / h & ine simba 5000m3 / h yemhepo, kufukidza 20-30m2.
Mativi matatu emhando yepamusoro 5090 # kunyatsoshanda zvirinani kutonhodza huchi hweuchi kutonhodza pad ine mafirita eguruva, shanda munzvimbo yakavhurika kuunza nyowani, inotonhorera uye yakajeka mweya yemukati.
LCD mvura proof control pani + kure kure, pane matatu akasiiwa akamhanya, ari nyore 24hours timer, mhando yepasirese mavhiri ane kukiya. Uye kune pamusoro pekuremerwa uye kwepombi kuchengetedza, Auto swing kuvhara nzvimbo hombe.
Yega Chikamu Chivharo Chikamu 20-30m2
Mhepo (M3 / H) 5000
Kununurwa Kwemhepo 5-8M
Ruzha 55 db
Tangi reMvura 30 L
Kushandiswa Kwemvura 5-8 L / H
Net Kurema 16Kg
Kuisa Zvakawanda 257pcs/ 40HQ 100pcs / 20GP
Mvura Inlet Chinyorwa
Kushanda : XK-05SY mhepo inotonhorera ine kutonhora, humidification, kuchenesa, simba kuchengetedza imwe basa, pamwe nekunyarara mhedzisiro. Inoshandiswa zvakanyanya kushandiswa kumba, hofisi shopu uye dzimwe nzvimbo.
Pashure: Stainless simbi hombe centrifugal maindasitiri emhepo inotonhorera XK-30/35/45 / 50S
Zvadaro: evaporative imba inotakurika mweya inotonhorera China inogadzira XK-06SY
Mhepo Inotonhorera Fani
Kumba Mhepo Inotonhorera
chando kurongedza mweya unotonhorera
Yemukati Mhepo Inotonhorera
Yemazuva Ano Mhepo Inotonhorera
Hofisi Mhepo Inotonhorera
inotakurika panze mvura evaporative mhepo inotonhorera X ...